Fitsangatsanganana an-tanàna sy fitsidihana amin'ny tolotrasa fampandehanana Basel -
Tsy ny mpanjifantsika raharaham-barotra ihany - fa ireo fianakaviana sy vondrona ihany koa mandrapahatongan'ny olona 7 - manolotra ny mety hisian'ny fitsangatsanganana amin'ny iray amin'ireo isika Lozam-piaramanidina malaza sy kanto amin'ny.
Indrindra fa ao amin'ny vanin-taona mafana Basel manintona mpizaha tany maro izay te-hahita sy tanàna manodidina any Soisa, Frantsa sy Alemaina. Noho ny toerana tsara indrindra azonay ahafahanao manao ny fitsangatsanganana an-tanànanao ho azo iainana araka izay tratra. Maro amin'ireo mpanjifa raharaham-barotra tahaka ny mampiasa ny fahafahana miray tsikombakomba raharaham-barotra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ary aoka ny za-draharaha manara chauffeurs avy lavitra noho adin-tsaina sy bahoaka ny vahoaka amin'ny alalan'ny tanàna ary tsy izany ihany ny zavatra hita, fa ny iray na roa, toro-hevitra mampiseho hatao.
Fanompoana an-tariby ho an'ireo tanàna mahafinaritra indrindra ao afovoan'i Eoropa
Our driver dia tsy mitondra afa-tsy fampiononana ihany, fa amin'ny fotoana fohy ihany koa, amim-pahazotoana sy amim-pahasambarana amin'ny toerana misy anao. Avy any Basel, ny tontolon'ny varotra eo amin'ny lalana mankany amin'ny tanàna izay safidinao no tsara indrindra.
Fantaro any Zürich avy any Limousine
Ny atody Afaka mandany adiny iray mandeha fiaramanidina avy any Basel mankany Zurich ianao amin'ny iray amin'ireo alemana alemana. Ankoatra ny arabe medievaly ao amin'ny tanàna romanina teo aloha, ny trano maoderina maoderina indrindra ao amin'ny Europaallee sy ny andrana kolontsaina lehibe indrindra any Soisa dia miandry anao eto amin'ny tranon'ireo lapa mangain'ny Landesmuseum Zurich. Farany fa tsy ny kely indrindra, ny varavarankely vita amin'ny fitaratra fanta-daza Chagall ao amin'ny Womenmünster any Zurich dia tena tsy hay hadinoina ho an'ny mpitsidika rehetra.
Tianao ny hampifandray ny dian-tanànanao any Zurich miaraka amin'ny traikefa an-dalantsary be mpividy? Hevitra tsara! Zurich dia malaza amin'ny mpitsidika manerana izao tontolo izao noho ny BOUTIQUES manokana, manokana fivarotana ary nanisy endrika ny ambony. Ireto ahitana Christa de Carouge, Fabric Frontline, Hannes B. sy Könix ao an-trano, ary miandry amin'ny famolavolana ny akanjo hafahafa, atin'akanjo sy ny kiraro. Ny Casino Casino ao Zurich dia mahavariana ny zava-mitranga mampientanentana amin'ny lalao sy ny lalao fifaninanana. Ary ho an'ireo mpankafy baolina kitra sy tanora, Zurich dia manasa anao any amin'ny Museum FIFA World Football.
Mankany an-tanàna mankany Mulhouse Ville ao amin'ny seranam-piaramanidina
Ny Frantsay Mulhouse - lalana antsasak'adiny avy any Basel - mizara ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i EuroAirport miaraka amin'i Basel sy Freiburg. Betsaka amin'ireo mpividy ara-barotra no mampiasa ny serivisinay amin'ny serivisy avy ao amin'ny seranan'i Basel mankany amin'ny toeran'ny Mulhouse Ville any Alsace. Ny tanàna ao amin'ny faritry ny sisintany dia nandresy manokana tao amin'ny 18. Century ho mpisava lalana ny revolisiona indostrialy frantsay miaraka amin'ireo orinasa fanenoman-damba tena manan-danja. Miaraka amin'ny mpiasa 10.000, Peugeot no mpampiasa lehibe indrindra any Alsace. Mulhouse Ville dia mahavariana fa misy fiovaovana tsy misy fetra eo amin'ireo andrim-panjakana manan-tantara eo amin'ny sehatry ny indostria sy fiangonana mekanika ary baikom-pokontany, ny tranombakoka Fabric Printing ary ny National Museum Cité de l'Automobile.
Ankoatra ireo tanàna any Soisa, Alemaina sy Frantsa, mazava ho azy, dia mazava ho azy fa mpitaingina anareo any amin'ny tanàna hafa ihany koa. Ho hitanao ny lisitr'ireo faritra voafantina ao amin'ny tranokalanay, izay hahitanao ny vidin'ny transfusion amin'ny seranam-piaramanidina. Manantena ny anareo izahay Online famandrihana na ny antsonao amin'ny 41 78 861 35 50.
Notsongaina tamin'ny: Airport shuttle Basel Airport mivezivezy Limousine service City Breaks
taxi.flughafen Aprily 6, 2017 Aprily 6, 2017 Uncategorized No comments
← BASELWORLD 2018 - Fialam-boly amin'ny Trans-Service Basel